7 uhlobo amabhere
Ezolimo imishini amabombo
Amabombo wemishini yemishini
Amabheringi we-NSK angajwayelekile
Amabhere angajwayelekile abe kancane kancane abe yizinto ezisemqoka ezisemqoka
Amabhere angajwayelekile Amabhere abalulekile futhi ayizinto ezisemqoka ezisemqoka embonini yokukhiqiza imishini, enquma ngqo ukusebenza, ikhwalithi kanye nokwethembeka kwemishini emikhulu nemikhiqizo yokusingathwa, futhi yaziwa njengezakhi "zenhliziyo" zokwenziwa kwemishini. I-Af ...
Ukuhlola kanjani ukubukeka kwamabhere angajwayelekile
Zonke izinhlobo zezibazi ezenziwa ngomshini, njengokulimala, ukuklwebheka, ukulimala kwengcindezi, imihuzuko, njll., Kuzodala ukufakwa okungekuhle, kubangele imithwalo eccentric kanye nokuhlushwa kwengcindezi, futhi kudale ukwehla kokunemba kokujikeleza nempilo yesevisi. Ukugqwala, isikhumba esimnyama, nokugwaza, lezi ezimbili zokugcina zingu-d ...
Ukungezwani okuthathu emhlanganweni wamabhere abangajwayelekile
Lapho ufaka futhi uhlanganisa amabheringi angajwayelekile, sinezidingo eziqinile kakhulu endaweni yokufaka nendawo. Uma unganaki umthelela wendawo yomhlangano, izinto zangaphandle ezinjengokufakwa kwensimbi kanye ne-burrs zizoxubeka kumabheringi angajwayelekile, wh ...
Ukugcinwa nokuthanjiswa kwamabhere angajwayelekile
Ngokuya ngokusetshenziswa kwezingxenye nemibandela yokusetshenziswa nezimo zemvelo, khetha usayizi, ukunemba, kanye namabheringi afanele angajwayelekile kuyisisekelo sokuqinisekisa ukuthwala impilo nokuthembeka. Indawo yokusetshenziswa: Amabheringi angajwayelekile alungele imithwalo ye-radial ehlangene ne-axial ...
Izindlela ezithile zokulungisa amabhele angajwayelekile
Amabhere angajwayelekile Uma i-bearing iletha izinkinga; umbono wokuqala ohlwini kufanele kube ukuhlola nokulungisa; ukungashintshi. Izinhlobo ezijwayelekile zokulungiswa kokuthwala zimi ngale ndlela elandelayo: 1. Ukulungiswa kwephutha: Lapho ukubola kuphuka; yeka ukubuka nokulungisa. 2. Ukulungisa okunesikhathi: Ukuze kuqinisekiswe ...
Izinkinga ekusetshenzisweni kwamabhere angajwayelekile
Izindlela zokuqapha ukusetshenziswa kwamabhere angajwayelekile: 1. Ngemuva konyaka owodwa wokusebenza okujwayelekile, 2 element of oil spindle and elementar and coarse filter element should be replace. 2. Lapho isiteshi sepompo sisetshenziswa ngokujwayelekile ukwenza uwoyela, kufanele sihlungwe ngezendwangu ezintathu zikasilika. 3. Ukulayishwa nokwehliswa ...
Ungavimbela kanjani ukuthwala ukugqwala?
Ukuhlanzwa kwendawo: Indlela efanele kufanele ikhethwe ngokuya ngobuso bento ephikisana nokugqwala nemibandela yangaleso sikhathi. Imvamisa isetshenziswa indlela yokuhlanza i-solvent, indlela yokuhlanza ukwelashwa ngamakhemikhali nendlela yokuhlanza ngomshini. Ngemuva kokuthi umhlaba usomile futhi ucocekile ...
Iziphi izinkinga okufanele zinakwe ekusetshenzisweni kwamabhere angajwayelekile
Amabheringi angajwayelekile kufanele afakwe esikhundleni sika-2 # uwoyela othini lokuphotha kanye nesihlungi esimahhadlahhadla nesihle ngemuva konyaka owodwa wokusetshenziswa okujwayelekile. Lapho isiteshi sepompo sisetshenziswa ngokujwayelekile ukwenza uwoyela, kufanele sihlungwe ngezingqimba ezintathu zendwangu kasilika. Ukulayishwa nokulayishwa kwe-shaft pulley enkulu nokugaya isondo m ...
Imikhuba yokunakekela engeyona ejwayelekile ibaluleke kakhulu
Kumabheringi angajwayelekile, amabheringi akhethekile angafaniswa nombuso, angasetshenziswa ezikhathini eziningi, futhi azosetshenziswa ezindaweni ezinezindawo ezinzima kakhulu. Banesikhathi eside senkonzo nesikhathi eside sokugcinwa. Ngakho-ke, ukwenza kanjani isondlo kube ...
Yini okufanele ngiyenze uma izinga lokushisa lamabhere angajwayelekile liphezulu kakhulu?
Impilo yesevisi yamabhere angejwayelekile ihlobene kakhulu nokukhiqiza, ukuhlangana, nokusetshenziswa. Kumele kwenziwe kuso sonke isixhumanisi ukwenza amabheringi angajwayelekile asesimweni esisebenza kahle, ngaleyo ndlela enwebise impilo yensizakalo yamabheringi angajwayelekile. 1. Ungabhekana kanjani nomphumela we-temperat ephezulu ...
Ungahlukanisa kanjani ikhwalithi ye-non-standard bearing shaft gear hobbing
Ukuhlaziywa kokunemba kwemishini yokuchofoza. Ukunemba kwegiya kushaft ikakhulukazi kuhlobene nokunemba kokuhamba, ukunemba kokuqina, nokunemba kokuthinta. I-hobting machining top isebenzisa ukulawula ubude bomugqa ojwayelekile nobubanzi begiya lendandatho ukuqinisekisa ukunemba kokuhamba; ukulawula ...
Ukuhunyushwa kwezindleko ezifihliwe zezinkampani ezithwala ezincane nezincane
Ukuncintisana, ikakhulukazi izinkampani ezithwala ezincane nezincane kanye nezinkampani ezithuthukisayo, zihlala zihlangabezana nezingqinamba zentuthuko esikhathini esithile, zihlala zizwa ukuthi izindleko zokusebenza bezikhuphuka, kepha kunzima ukuthola "indawo" ...
Ikheli:Idolobha le-Tang tang yuan yuan, i-liaocheng e-shandong linqing city, umgwaqo omkhulu no. 168